Qaramada Midoobey oo waqti u kordhisay ciidamada jooga xeebaha Soomaaliya. – Radio Daljir
Noofember 10, 2016 3:37 b 0
New York, Nov 10 2016-Gollaha ammaanka Qaramada Midoobay ayaa ku dhiiri galiyay wadamada caalamka inay sii wadaan wada shaqaynta Soomaaliya eek u saabsan la dagaalanka burcadbadeeda.
15 xubnood ee gollaha ammaanka ayaa qaraar ku meel mariyay cusboonaysiinta oggolaanshaha ku saabsan in dalalka iyo ururada gobolka ay siiwadaan howgalka la dagaalanka burcadbadeeda Soomaaliya muddo halsano ah.
Gollaha ammaanka ayaa u aqoonsaday in burcad badeedu qeyb ka tahay xasilooni la’aanta ka jirta Soomaaliya, iyagoo ku eedeeyay lacagaha madax furashada u qaataan inay dabka kusii shidaan dambiyada iyo musuq maasuqa ka jira Soomaaliya.
Sida lagu sheegay warbixin Qaramada Midoobay, hawlaha burcad badeeda ee Soomaaliya iyo sii socoshada kalluumysiga sharci darrada ayaa walaac xoogan ku abuuray caalamka.